We.com.mm - သင့်ကောင်လေး သင့်ကိုပြောပြမှာမဟုတ်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၅)ခု
သင့်ကောင်လေး သင့်ကိုပြောပြမှာမဟုတ်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၅)ခု
ယောက်ျားလေးတွေက မိန်းကလေးတွေဆီက ဘယ်လိုအရာတွေမျှော်လင့်လဲ? ယောက်ျားလေးတွေ ဘာကြိုက်တတ်လဲ? ယောက်ျားလေးတွေ စိတ်ဝင်စားအောင် ဘာလုပ်သင့်လဲ? စသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ချစ်သူကောင်လေးက သူ့ကောင်မလေးကို ဘယ်တော့မှ ပြောပြမှာ မဟုတ်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေကို သိချင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
၁. သင့်ချစ်သူဖြစ်ရတာကို သဘောကျတယ်
မိန်းကလေးအများစုထင်ကြတာက ယောက်ျားလေးတွေက ငပွေးတွေ၊ Single ဘဝနဲ့ အခြေချချင်သူတွေ၊ အထူးသဖြင့် မိန်းမနဲ့ပတ်သက်လာရင် တစ်ယောက်တည်းနဲ့မတင်းတိမ်နိုင်သူတွေရယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ အဲလိုထင်အောင် တကယ်မကောင်းတဲ့သူတွေကလည်း ရှိကြတာကိုး။ တကယ်တော့ မကောင်းတဲ့သူကတော့ ယောက်ျားလေးရော မိန်းကလေးပါ ရှိတာပဲလေ။ ယောက်ျားအားလုံးမကောင်းဘူးဆိုပြီး ဝါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်းလို့တော့မရဘူးပေါ့။ ယောက်ျားတိုင်းက ပွေရှုပ်ပြီး မရင့်ကျက်တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ယောက်ျားလေးတွေက မိန်းကလေးတွေထက်တောင် ချစ်တတ်ပါသေးတယ်။ သူချစ်တဲ့ကောင်မလေးရဲ့ ချစ်သူအဖြစ်နဲ့နေနေရတာကိုက သူ့အတွက် ပျော်စရာလို့ထင်နေသူတွေပါ။
၂. ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လှန်ထားတာကို မကြိုက်ဘူး
တချို့ကောင်မလေးတွေရှိပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကို တကယ်ချစ်တာလား မချစ်တာလား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် မသေချာပဲ ချစ်တယ်လည်းမပြော၊ ငြင်းလည်းမငြင်းပဲ အချိန်ဆွဲနေတာမျိုးတွေပေါ့။ ကောင်လေးတွေက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို သဘောကျလို့လိုက်နေတဲ့အချိန်တော့ စိတ်ရှည်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် ချစ်တယ်လို့ ဖွင့်ပြောပြီးရင်တော့ အခြေအနေက ပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ သူတို့ဘက်က တတ်နိုင်သလောက် ဘယ်လောက်သဘောကျကြောင်း ချပြပြီးပြီဆိုရင်တော့ အဖြေတစ်ခုကို ရဖို့ပဲ စိတ်ဝင်စားပါတော့တယ်။ ဒါကို ဟိုလိုလို ဒီလိုလို လုပ်နေရင် လက်လျှော့ပြီး တပ်ဆုတ်ဖို့က ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသေချာပါတယ်။ ခုခေတ်ကောင်လေးတွေဆိုပိုဆိုးပါတယ်။ အရင်ခေတ်လို ၃ နှစ် ၃ မိုး ဘယ်သူမှ မစောင့်တော့ပါဘူး။
၃. သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သဝန်တိုတယ်
ကောင်လေးတွေက သူတို့သူငယ်ချင်းတွေကို အရမ်းခင်တွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့သူငယ်ချင်းတွေက သူတွဲတဲ့ကောင်မလေးကို သဘောကျစေချင်တယ်။ ချစ်ကြိုက်သွားစေချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လို သဘောကျစေချင်တာ။ အရမ်းလှတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွဲလို့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းကို ခံချင်ပေမယ့် ကိုယ့်ကောင်မလေးကို သူငယ်ချင်းတွေ ကျိတ်ကြံမှာလည်း စိုးရိမ်ကြပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် တွဲခါစမှာ သင့်ကောင်လေးက သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သိပ်ပြီးပေးမတွေ့ဘူးဆိုရင် သူ့မျက်လုံးထဲမှာ သင်အရမ်းလှနေလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တွဲတာလည်းကြာပြီ၊ ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်လည်း ရောက်နေပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မိတ်မဆက်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ခုခုမှားနေပါပြီ။
၄. သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တည့်စေချင်တယ်
သဝန်တိုတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တည့်စေချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို သင်ကကြည့်မရဘူး၊ မတည့်ဘူးဆိုရင် အဲဒီသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားလာတွေ့ဆုံတာတွေကို သင်ပိတ်ပင်လာမှာစိုးလို့ပါ။ အချေအတင်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ “ငါ့ကို ရွေးမှာလား၊ နင့်သူငယ်ချင်းတွေကို ရွေးမှာလား” ဆိုတာမျိုးပေါ့။ နောက်တစ်ခုက သင်ကဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်နေပါစေ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက အရမ်းအရောဝင်ချင်မှ ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါက သင့်ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးညံ့လို့မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေသဘောကျအောင် အတင်းကြီးလုပ်ယူနေဖို့ သူမလိုလားပါဘူး။ သူ့တစ်ယောက်ရဲ့အမြင်ကိုပဲ အာရုံစိုက်စေချင်ပါတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တော့ အလိုက်အထိုက်လေးနေပေးရင် ရပါပြီ။
၅. ချစ်သူပစ်သွားမှာ စိုးရိမ်ကြတယ်
မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေကို ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ခဏခဏမေးကြတယ်။ တကယ်တော့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် ကိုယ့်ဆီမှာ ကြာရှည်တည်မြဲဖို့ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ ဘာလို့လဲ။ ယောက်ျားလေးတွေက ပြတ်ပါတယ်။ ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်၊ မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူး။ ဒါပဲ။ သူတို့စိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်နေလဲ အပိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် သူတို့သဘောကျလို့တွဲနေတဲ့သူကို ပစ်သွားဖို့စိတ်ကူးမရှိပါဘူး။ ပစ်သွားဖို့နေနေသာ သူတို့ကို ပစ်သွားမှာကိုပဲ တွေးပြီး စိတ်ပူနေတတ်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာတိုင်း “လမ်းခွဲကြရအောင်/ လမ်းခွဲချင်နေပြီမလား” ဆိုပြီး သွားမမေးပါနဲ့။ သင်ကတော့ အချော့ခံချင်လို့ ပြောတာဖြစ်ပေမယ့် ကောင်လေးဘက်က သူ့ကိုတကယ်လမ်းခွဲချင်နေတယ်လို့အတွေးဝင်ပြီး ပြဿနာက ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။
Charlie Puth ဒိတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ နာမည်ကြီး Cele (၅) ယောက်
လက်ရှိရည်းစားကို အရင်ရည်းစားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြသင့်တဲ့အကြောင်းအရာများ
သင့်ချစ်သူက အသစ်တွေ့နေပြီဆိုတာကို ခန့်မှန်းလို့ရစေမယ့်အချက်များ
မိထွေးဖတ်ပြတဲ့ စာကြောင့် မျက်ရည်တဲ့ ၄ နှစ်သားလေး
ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားထက် ပိုလေးနက်တဲ့ စကား (၆) ခွန်း
သင်အံ့သြသွားမယ့် K Pop Star (၁၀) ယောက်ရဲ့ မိတ်ကပ်မလိမ်းထားတဲ့ပုံများ
သြစတြေးလျတောမီးဒဏ်ခံရတဲ့ သိုးတစ်အုပ်ကို ကူညီကယ်ဆယ်ပေးခဲ့တဲ့ ခွေးမလေး
အမျိုးသမီးတိုင်းအတုယူသင့်တဲ့ Miss Universe 2019 ဆုရ အလှမယ်ရဲ့ အဖိုးတန်စိတ်ထား
မြမြဝိညာဉ်က သူမကိုမြှပ်ထားတဲ့နေရာကို လိုက်ပြရင်း တကယ်ပွဲကြမ်းတဲ့ Video File